Michelle Obama ရဲ့ ပုံတူပန်းချီထဲက ဝတ်ဆင်ထားသော အင်္ကျီ… – FemaleWear.net
Michelle Obama ရဲ့ ပုံတူပန်းချီထဲက ဝတ်ဆင်ထားသော အင်္ကျီ…
အမေရိကန်သမ္မတ(ငြိမ်း) Barack Obama နဲ့ သူ၏ဇနီး Michelle Obama တို့ရဲ့ ပုံတူပန်းချီ unveil အခမ်းအနားကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ရက်နေ့ Washington, DC ရဲ့ Smithsonian’s National Portrait Gallery မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Obama ရဲ့ ပုံတူပန်းချီကို ဖန်တီးသူကတော့ Kehinde Wiley ဖြစ်ပြီး Michelle Obama ရဲ့ ပုံတူပန်းချီကိုတော့ Amy Sherald ကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Michelle Obama ရဲ့ပုံတူပန်းချီထဲမှာပါတဲ့ အင်္ကျီကတော့ MILLY brand ရဲ့ Co founder ဖြစ်တဲ့ Michelle Smith ကဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Dress design ကိုတော့ MILLY ရဲ့ spring 2017 collection ထဲက ဒီဇိုင်းကိုအခြေခံပြီး ဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့…။
ဒီဝတ်စုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သူမကလည်း အသိဉာဏ်နဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ အမျိုးသမီးအတွက် အထူးဖန်တီးပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ယုံကြည်မှု, အလှအပ, ကြင်နာမှုနှင့် သနားခြင်း ကရုဏာစိတ်ကိုထင်ဟပ်တဲ့ သူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း Michelle Smith ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Smith အတွက်တော့ Michelle Obama အတွက် ဖန်တီးပေးခြင်းဟာ ဒါပထမဦးဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ဖြူတော်နောက်ဆုံးနေ့မှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တာကလည်း Milly blouse အင်္ကျီဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Taking it in on one last walk through the People’s House. ??????
Tags: Michelle Obama, MILLY
ရွှေခြုံလွှာဒီဇိုင်းမျိုးစုံသာမက စိန်ခြုံလွှာကိုပါ ပထမဆုံးချပြလိုက်တဲ့ အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်